Sinocare inokuhlangenwe nakho kweminyaka engu-19 embonini ye-BGM selokhu yasungulwa ngo-2002, iyinkampani enkulu yokukhiqiza iBGM e-Asia kanye nenkampani yokuqala yokukhiqiza imitha yegazi e-China, ezinikezela emisha yethekhnoloji ye-biosensor, ukuthuthukisa, ukukhiqiza nokumaketha ngokushesha imikhiqizo yokuhlola ukuxilongwa. Ngo-2016, ngemuva kokutholwa ngempumelelo kweNipro diagnostic Inc. (manje eseyaziwa ngeTrividia Health Inc.) nePTS Diagnostics Inc. ISinocare isibe ngumkhiqizi wamamitha amaningi eglucose egazini no-5 futhi enye yezinkampani ezihola phambili embonini ye-POCT embonini umhlaba.
Ngokuhlinzeka ngemikhiqizo esezingeni eliphakeme kanye nezinsizakalo kubantu abanesifo sikashukela nezinye izifo ezingamahlalakhona ukubasiza ukuthuthukisa ikhwalithi yempilo yabo.
Isazi sokuhola isifo sikashukela esihola phambili eChina nase BGM emhlabeni.
Umklomelo Onikezwe “Umklomelo Wokuqashwa Abamabhizinisi Abamabhizinisi Abahamba phambili China China”
Ngathola isitifiketi sokubhaliswa kwensiza yezokwelapha kanye nokuvunyelwa kokukhiqizwa ngo-2004. Kwadlula i-ISO: 13485 ye-EU TUV futhi bathola isitifiketi se-CE ngo-2007.
UKUQASHELWA KOMHLABA WONKE
Kubhalwe yiForbes njengenye yeNkampani yase-Asia engu- “Best Under A Billion” yase-Asia ngo-200 njengesikhungo esikhulu sokukhiqiza iBGMS e-Asia.
Kutholwe ibhizinisi lemitha leshukela legazi lesithupha emhlabeni. Ungene ekamu elihola phambili le-BGMS emhlabeni.
ISinocare Lu Valley Biosensor Manufacturing Facility etholakala e-Changsha National High-Tech Industrial Development Zone yethulwa ngo-2013. Njengoba inendawo ezungeze u-66,000 m2, imboni yethu iba isizinda esikhulu sokukhiqiza i-Blood Glucose Monitoring System (BGMS) e-Asia.
Ibhizinisi lethu lihlanganisa amazwe nezifunda eziyi-135 emhlabeni.
Ngaphezu kuka-63% isabelo se-OTC kanye namakhemisi angama-130,000 eChina.
Imikhiqizo yethu ifaka ushukela wegazi, i-lipids yegazi, i-ketone yegazi, i-hemoglobin eglycosylated (HbA1c), i-uric acid nezinye izinkomba zesifo sikashukela.
Njengomunye wemiklamo yokubonisa yeNational Biomedical Engineering High-Tech Industrialization Programme, iSinocare ithole ukwesekwa kwezezimali kwiNational Innovation Fund kaningana, yadlulisa i-ISO: isitifiketi sohlelo lokuphathwa kwekhwalithi engu-13485 kanye nesitifiketi se-European CE ngo-2007.
UNGCWELE WOKUPHATHWA KABAShukela
Eminyakeni eyi-15 edlule, amasistimu wethu wokuqapha ushukela wegazi onembile, ongabizi, futhi asebenziseka kalula atholakale kahle yizo zonke izingxenye zamakhasimende kulo lonke elaseChina, ngaphezu kuka-50% wesifo sikashukela esiziqaphelayo esisebenzisa imikhiqizo yeSinocare. Singasho ngokuziqhenya ukuthi sifunde ngempumelelo futhi sakhuthaza ukuzihlola kwe-glucose yegazi kubantu abanesifo sikashukela eChina.
Kodwa-ke, ukuba nesistimu yokuqapha ushukela egazini kuyisinyathelo sokuqala kuphela. Ukufeza inhloso yokulawula izinga le-glucose yegazi ngempumelelo, abantu abanesifo sikashukela kudingeka bafunde ukuthi bangayihlola kanjani i-glucose yegazi, bahlole nini, bavivinye kangaki, nokuthi benzeni nedatha. Ngaphandle kwalokho, indlela ukudla nokuvivinya umzimba okunomthelela ngayo ezingeni likashukela egazini ngalinye kumele libhekwe njengengxenye yokulinganisa. Ukusiza abantu abanesifo sikashukela ukuthi baqonde zonke izici ezibalulekile zokuphathwa kwesifo sikashukela zihambisana ngokuphelele nenhloso yethu, "Ukusuka Kumgqugquzeli Wamamitha weGlucose kuya Kwezobuchwepheshe Bokuphatha Isifo Sikashukela".
Le nhloso igqugquzela wonke umuntu eSinocare: silethe izinhlelo zokuqapha ushukela wegazi ngobuchwepheshe obuthuthuke kakhulu, sithuthukise abahlaziyi be-multi-analyzer ukunikeza ulwazi oluthe xaxa ngesifo sikashukela, sithuthukise ipulatifomu yokuphathwa kwesifo sikashukela esibhedlela ukuvala isikhala phakathi kodokotela, iziguli, odokotela bezokudla , nabafundisi besifo sikashukela. Ekugcineni, sizokwakha uhlelo lokulawulwa kwesifo sikashukela futhi sinikeze isisombululo sokwenza ngcono izinga lempilo kubantu abanesifo sikashukela, ukwenza lula ukuxhumana phakathi kwabahlinzeki bezokunakekelwa kwempilo neziguli, nokwenza ngcono umnotho wezempilo womphakathi wethu.